Weerar lagu Qaaday Kaniisad ku Taaala Dalka Maraykanka oo ay ku Dhinteen Lix iyo Labaatan Qof – Xeernews24
Weerar lagu Qaaday Kaniisad ku Taaala Dalka Maraykanka oo ay ku Dhinteen Lix iyo Labaatan Qof
6. November 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Mas’uuliyiinta gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in labaatan iyo lix qof (26)lagu dilay kaniisad ku taala magaalada Sutherland Springs ee gobolkaasi, kadib markii uu rasaas ku furay nin hubeysan. Wararku waxaa ay sheegayaan in shan iyo labaatan qof(25) oo kale ay ku ku dhaawacmeen weerarka.
Magaalada uu weerarka ka dhacay ayaa qiyaasti konton kilomitir(50) dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada San Antonio. Booliska gobolka Texas ayaa warbaahinta maxaliga ee dalkaasi uu sheegay in raggii weerarka geystay la dilay, waxaana la arkayay muuqaalo muujinaya ciidamada ammaanka oo soo buux dhaafiyay goobta uu weerarka ka dhacay.
Gawaadhida gurmadka degdega iyo kuwa dab damiska ayaa sidoo kale soo gaadhay goobta, waxaana sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in dadkii halkaasi ku sugnaa lasoo daad gureeyay. Barasaabka gobolka Texas Mr Greg Abbot ayaa sheegay in ay hadda la tacaalayaan xaalad adag oo soo wajahday.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/Taxas.jpg 371 660 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-06 09:15:592017-11-06 09:15:59Weerar lagu Qaaday Kaniisad ku Taaala Dalka Maraykanka oo ay ku Dhinteen Lix iyo Labaatan Qof
wax ka ogoow: 7 Qodob Oo Ay Ka Simman Yihiin Dalalka Libnaan Iyo Soomaaliya... Qiyaasta Gantaalaha Kuuriya u sii socon karaan dalka Maraykanka(xogaha Dahs...